कर्णाली अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द – Newssarokar
कर्णाली अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द
न्यूज सरोकार । २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १५:४६
जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले ओपिडी सेवा बन्द गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जोखिम कम गर्न ओपिडी सेवा बन्द गरेको हो । आकस्मिक सेवा मार्फत उपचार भइरहेको निमित्त अ स्पताल निर्देशक डा. राजिव शाहले जानकारी दिए ।
सवै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको उपचारमा खटिनुपर्ने भयो,डा.शाहले भने,‘ अहिले आकस्मिक वाहेकका सेवा वन्द छन् । ओपिडीमा रहेका जनशक्तिहरु कोरोनाको उपचारका लागि खटिएका छन । ’ कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, सर्वसाधारण विरामी तथा समुदायको सुरक्षाको लागि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको हो । इमरजेन्सी बिरामीका लागि प्रतिष्ठानले हटलाइन सेवाको व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै रोगका बिरामीले १६६०८७५२५५५ नम्बरको हटलाईन सेवा प्रयोग गरेर उपचार विधि बारे जानकारी लिन सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
साधारण समस्या भएका विरामीहरुले टेलिफोन मार्फत चिकित्सकलाई परामर्श सेवा लिन सक्नेछन,डा. शाहले भने,‘प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ डा. पुजन रोकाया हाडजोर्नी, डा. सूर्यमान लिम्बु सर्जरी, डा. राजेन्द्रमणि गिरी मेडिसिन, प्रा.डा. सुनिल बुढाथोकी बालरोग, डाक्टर राजिव शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञले फोनबाट बिरामीलाई परामर्श दिनेछन । ’
कोरोना संक्रमण बढेपछि जनशक्ति खटन पटन व्यापक गरिएको छ । प्रतिष्ठानले २४ सै घण्टा ५ जना डाक्टर राखेर ईमरजन्सी र कोरोनाको उपचारमा लागिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कर्णाली प्रतिष्ठानका ६ जना चिकित्सकको टोली नेपालगंजको भेरी अस्पतालमा पठाएको छ ।
कोरोना संक्रमणको उपचारमा खटिरहेका कर्णाली प्रतिष्ठानमा अहिले जिल्ला बाहिरबाट विरामी आउन थालेका छन् । सुर्खेतबाट आएका मध्यम स्वास्थ्य समस्या भएका वेड र अक्सिजन आवश्यक विरामीको समेत उपचार भईरहेको छ । प्रतिष्ठानले एकजना विरामी सिकिस्त विरामी भएको जनाएको छ । यसैगरी कोरोना पोजेटिभको संख्या ४८ पुगेको पुगेको छ । प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकडर मेघराज बुढाका अनुसार ४ वटा बाहिरबाट आएको सेम्पल सहित अन्य जुम्लाका गरी ४८ जना संक्रमित भएका छन ।
जुम्लामा बैशाख २२ गते राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १५:४६
कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जान थालेपछि जुम्लामा निषेधाज्ञ गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले बुधबार राति १२ बजेदेखि बैशाख मसान्त सम्म निषेधाज्ञ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाइका अनुसार विहान ६ बजेदेखि ९ बजे सम्म […]
३० श्रावण २०७८, शनिबार १७:२१
हुम्ला विमानस्थलबाट ५ केजी यार्सागुम्बा बरामद, एक व्यक्ति पक्राउ
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०७:२८
कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्न माओबादी केन्द्रले बनायो समिति, जिम्मेवारीको टुंगो लागेन
३ आश्विन २०७८, आईतवार ०७:०५
६० वर्षीय वृद्ध कस्तुरीकाे विनासहित पक्राउ
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १२:११
कुरीति अन्ते गर्दै पातारासी गाउँपालिका
२० भाद्र २०७८, आईतवार १९:०८
नगरपालिका भित्रका ६वटा विद्यालयमा पिसिआर परिक्षण गर्दा ३६जना सङ्क्रमण ,एक विधालयको रिपोर्ट आउन वाकि
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०७:२०
बाढीले लुटिएको हमालको सपना